प्रचण्डलाई ‘हेग’ ओलीको तुष मात्र ! - नेपालबहस
प्रचण्डलाई ‘हेग’ ओलीको तुष मात्र !
| १५:४५:३६ मा प्रकाशित
पार्टीभित्रको विवादमा बिजय प्राप्त गर्न केपी शर्मा ओलीले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्न थालेका विवरण बाहिर आएका छन् । भोली अर्थात मंसिर १३ गते सचिवालयमा आफुलाई चोख्याउन ओलीले सबै अस्त्र प्रयोग गर्ने उनका निकटस्थहरुले बताइसकेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ काे जुहारीले सिंगो पार्टी र सरकार भँड्खालामा पर्ने निश्चित छ । तर, यो पार्टी भँड्कालोमा मात्र जाकिने हो कि, अन्तहिन ब्ल्याकहोलमा विलिन हुने हो ? अहिले प्रश्न सबैतिर उठ्न थालेको छ । ब्ल्याकहोल यस्तो भुमरी हो जुन अन्तरिक्षमा हुन्छ, जहाँ प्रबेश गर्ने कुनै पनि बस्तु कहिल्यै फुत्कन सक्दैन ।
विश्वका ९९ प्रतिशत कम्युनिष्ट त ५० को दशकमै व्ल्याकहोलमा विलिन भैसकेका छन् । नेपालमा मात्र कम्युनिष्टको उदय त्यहीँ ताका हुन पुग्यो । जनवादी गीत र क्रान्तिका कुराले नेपाली जनता जुरुक्क उचालिए । जुन बेला कम्युनिष्ट शासनबाट बिश्व थेचारिएको थियो । अहिले नेपालमा मात्र कम्युनिष्ट सल्बलाएको छ । अनुदारवादी मुलुकहरु उत्तरकोरिया, चीन, क्युवा र भियतनाममा पनि यतिबिघ्न कम्युनिष्टको रडाको मच्चिएको छैन । यही सेरोफेरोमा रहेर नेपालमा कम्युनिष्ट र ओलीको चर्तिकला अहिले चर्चाको शिखरमा छ ।
पछिल्लो एक महिना नेकपाको विवाद चरम रुपमा उक्लिएको छ । प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरुले ओलीलाई भ्रष्टाचारको ‘नायक’ प्रतिबिम्वित प्रतिवेदन बुझाएपछि ओली समुह तिरिमिरी रन्थनिएको छ । मिडिया र सामाजिक संजालमा ओलीका निकटस्थहरुको चित्कारप्रति जनता गलल हाँसिरहेका छन् । उनीहरुको कुनै कुरा जनताले पत्याएका छैनन् । प्रचण्डको प्रतिवेदन जस्तै भ्रष्टाचारका केही बुँदाहरु समेटेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले यही साता प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारको जड भएको कारणसहित प्रतिवेदन सार्बजनिक गरिदियो ।
अघिल्लो दिन १८ बर्षिया किशोरी सपना मगर विश्व माँझ नेपालको नाम विश्वभरि कमाउँदै थिइन् भने पछिल्लो दिन ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर बिश्वमै भ्रष्टाचारको नायकमा बदनाम कमाउँदै थिए । प्रचण्डको प्रतिवेदन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्ट आदि बदनामका फेहरिस्तका प्रष्टिकरण ओलीले कसरी देलान्, यो अर्को जिज्ञासा हो । प्रचण्डलाई काउण्टर जवाफ दिन ओली पक्षले द्धन्द्धकालिन मुद्धा उठाएर उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउने बिषय प्रवेश गराउने रणनीति बाहिर आएको छ । यो एक प्रकारको ओली ‘तुष’ मात्र हो । द्धन्द्धबाट सर्बाधिक सर्वसाधारण जनता पीडित बनेका छन् । ओली पीडित होइनन् । प्रचण्डसहितलाई हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउन केबल ती पीडित जनतालाई मात्र अधिकार छ ।
जब वृहत शान्ति सम्झौतामा नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन एमाले र माओवादी बीच सहमति भयो, तब त्यहिबेला जनताप्रति धोका भएको थियो । यो कार्यमा दोस्रो लहरमा बसेर ओलीले सम्झौतामा सहमति जनाएका थिए । त्यतिबेला (२०६३ कात्तिक) , जनताप्रति धोका भयो भन्न नसक्ने ओली अहिले कुन मुखले हेगको कुरा गर्देछन् ? यो पुर्वाग्रहपुर्ण तुषले ओलीलाई झनै पतन बनाउने निश्चित छ ।
यो सरकार गठन भएपछि तरकारीमा तीन शय प्रतिशत, खाद्यान्नमा १० देखि ५० प्रतिशत र अन्य अत्यावस्यक बस्तुमा करिब शतप्रतिशत महंगी बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पटक पटकको प्रतिवेदनमा सार्बजनिक भइसकेको छ । तर, अझै सरकारका मन्त्रीहरु, उच्च अधिकारीहरु, सरकार निकटका कार्यकर्ता र विचौलियाहरुले महंगी बढाइरहेका छन् ।
युद्ध अपराधमा प्रचण्डलाई अन्तर्रारष्ट्रिय कानुन लागु हुँदै गर्दा ओलीसहित देउवा लगायत सबै जाकिनेछन् भन्ने हेक्का नहुने ओली पक्षधरको कमजोर सोच एक प्रकारको आत्मघाती कदम हुनेमा दुईमत छैन् । यहाँ प्रचण्डलाई द्धन्द्धकालिन मुद्धा आर्कर्षित नहुने भनेको होइन । यो पंक्तिकारले नै पहिलो पटक प्रचण्डको हेग यात्राका बिषयमा आलेख सार्बजनिक गरेका थियो । प्रचण्डसहित युद्धसँग जोडिएका एक/एक पात्र युद्ध अपराधमा सजांय भोग्नुपर्छ भन्नेमा यो पंक्तिकार अझै दृढ छ ।
तर, जो युद्ध अपराधलाई लुकाउन चाहन्छ, त्यो पात्रले अहिले रिसरागको तापबाट प्रशिक्षित भएर प्रचण्डलाई हेगको यात्रा सम्झाउनु भनेको आफ्नो खुट्टामा आँफैले बन्चरो हाने बराबर हो । त्यतिबेला ओलीसहितले राजनीति फाइदाका लागि जनताका न्यायका कुरा बोलेका थिएनन् । अहिले राजनीति जोडघटाउमा प्रचण्डका द्धन्द्धकालिन मुद्धा स्मरण गर्नु मनचिन्ते पुर्वाग्रह मात्र हो ।
ओली शासनकाल जनताका लागि काल झैं बन्दै गएपछि सत्ता साझेदार सबै नेताहरु ओलीबाट रुष्ट छन् । प्रतिपक्ष लगायत सबै तप्कामा ओलीप्रति बिकर्षण झाँग्गिैंदै गएको छ । अब ओलीको संभावित खेल हेर्नु अघि जनघाती कामहरुप्रति ध्यान जान आवश्यक छ । मार्क्सका आर्दशलाई पछ्याउने ओली कति मार्क्सवादबाट विपरित दिशातर्फ कुदिरहेका छन् । एकपटक विचार बिमर्श गरौं ।
मार्क्सले कुनै बेला बिशाल जर्मनी देशका नागरिकलाई सम्बोधन गर्दे भनेका थिए, ‘ बाल श्रमको अन्त्य र अनिवार्य बाल शिक्षाको माग आजको आवश्यकता हो ।’ तर, नेपालमा मार्क्सका पछि लाग्ने ओली यो बिषयमा बोल्दैनन् । ओलीकाे शासनकालमा नेपालका बालबालिका भोकले सडकमा थाल थापिरहेका छन् । उपचार नपाएर अभियन्ताहरुले खर्च जुटाइरहेका छन् ।
१८४१ अप्रिलमा मार्क्सले भियना विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेपछि भनेका थिए, ‘जनतालाई सताउने शासन र शासक जरैदेखि फाल्नुपर्छ ।’ आज ओली शासन जनतालाई सताउने खालको चित्रित बनिरहेको छ । कोरोना भाइरसले करिब बर्षदिन थलिएको विश्व अर्थतन्त्र र ब्यापार विस्तारै तंग्रिन थालेको छ । कोरोनाकै कारण नेपाल जस्ता गरिब मुलुकहरु लकडाउन बाहिर निस्कन थालेका छन् । बिश्वका गरिब देशहरुले लकडाउन लगाएनन् । विकसित र धनी मुलुकले धेरै सामग्रीहरु मौज्दात राखेका हुन्छन् । जस्तै, औषधी, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ आदि । तर, हामी कहाँ केही मौज्दात छैन । केही उत्पादन छैन । तर, पनि ओली सरकार महंगी बढाएर जनतालाई पेलेको पेल्यै छ ।
अहिले विश्वका धेरै विकसित मुलुकले यहि प्रणाली अपनाएका छन् । देशको राजधानीमा बस्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान लागु गरिएका छन् । जस्ले गर्दा केही देशका राजधानीमा भन्दा अन्य शहरमा जनसंख्या बढी छ । तर, नेपालमा मात्र किन राजधानीमै एक चौथाई जनसंख्या ओइरिएको छ ? अब यो प्रश्न उठाउनुपर्छ ।
यो सरकार गठन भएपछि तरकारीमा तीन शय प्रतिशत, खाद्यान्नमा १० देखि ५० प्रतिशत र अन्य अत्यावश्यक बस्तुमा करिब शतप्रतिशत महंगी बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पटक पटकको प्रतिवेदनमा सार्बजनिक भइसकेको छ । तर, अझै सरकारका मन्त्रीहरु, उच्च अधिकारीहरु, सरकार निकटका कार्यकर्ता र विचौलियाहरुले महंगी बढाइरहेका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि सबैजसो देशले निर्यात रोक्न थालिसकेका छन् । अझै कति महंगी बढ्ने हो कसैले अनुमान गर्न सक्दैन ।
ओली सरकार भएकै कारणले विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले अनुदानमा कटौती गरेका छन् भने केही आयोजनाहरु (एमसीसी लगायत) दिए जस्तो गर्न विभिन्न शर्त राख्दै अल्झाइरहेका छन् । न आफ्नै उत्पादन, न अनुदान न कुनै ब्यापार ब्यबसाय । अब केही दिनमै नेपाली बजार अनियन्त्रित र घोर महंगीमा झन झन उचालिनेछ । नेपालका युवाहरु भारततर्फ हानिएका छन् । रेमिट्यान्सले धान्दै आएको हाम्रो अर्थब्यवस्था खल्बलिने अबस्था आउने संकेतहरु देखिएका छन् । हरेक नेपालीका घरघरमा भोकमरीले सताइसकेको छ । यो भयावह अबस्था कल्पना भन्दा बाहिरको छ । तर, ओलीलाई आँफु पार्टीमा कसरी सुपेरियर बन्नेमै ध्यान छ ।
मंहगी त यो सरकारले शुरुदेखि नै नियतवस बढाइरहेको छ । अहिले मुखमा लगाउने माक्सदेखि तरकारीसम्म, खाद्यान्नदेखि औषधीसम्ममा हजार प्रतिशत महंगी बढिरहेको छ । वर्तमान सरकार रमिता हेर्ने वा यही मौकामा राज्यको रकम असुलिरहेका छन् । अब बोल्ने सडकका आवाजहरु बाक्लिंदै गएको छ । यसैमा आधारित प्रचण्डको प्रतिवेदन सार्बजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्री, आपुर्तिमन्त्रीहरु नै विचौलियालाई संरक्षण गरेर सरकारको मुख्यकर्ता भएको धेरै पटक प्रमाणित रुपमै समाचारहरु बाहिर आएका छन् ।
नेपाल तुलनात्मक रुपमा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक होइन । मधेशमा तीव्र रुपमा जनसंख्या बढेपनि पहाड र हिमालसम्म जनसंख्या घट्दो क्रममा छ । तर, पनि काठमाडौंका गल्ली हेर्यो भने बंगलादेश जस्तो पुरै भद्रगोल छ । विश्वमा सबैभन्दा अब्यबस्थित शहरहरु भएको देश वंगलादेश हो । अहिले काठमाडौं जनसंख्याको ठुलो चपेटामा छ ।
कोरोनाले होइन, भोकले जनता मरिरहेका तर्फ ओलीले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । कोरोनाको बहाना देखाएर ओली सरकारले गर्न सक्ने कुनै काम गरेका छैन । यो सरकारले कसरी भ्रष्टाचार गर्ने बारेमा मात्र आफ्नो शक्ति उपयोग गरिरहेको छ । कोरोनाको यो बिषम घडीमा बिश्वका अधिकाश देशहरुले बातावरणमा व्यापक सुधार गरेका छन् । शहरको सरसफाई र नागरिकका जीवनयापनमा सुधारमा व्यापक फेरबदल गरेर कुनै पनि भाइरसबाट बंच्न सक्ने उपाय खोजिरहेका छन् । तर, ओली सरकारले एउटा उपत्यका शहरलाई झन कुरुप र प्रदुषण बढाइरहेको छ ।
यो कोरोना अबधिमा करिब एक बर्षसम्म लामो बिदा पर्यो । यो सयममा उपत्यका खाली जस्तै बन्यो । तर, सरकारले सडक निर्माणदेखि पार्क बनाउने कामहरु गर्ने दीर्घकालीन योजनाहरु ल्याउन सकेन । यो समस्याको घडीमा सरकारले एउटा त दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन सक्थ्यो होला नि । त्यो हो, ब्यबस्थित शहर । त्यसका लागि खाका तयार गरेर असरल्ल परेको यो बजारलाई शहरमा रुपान्तरण गर्ने योजना ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो ।
ब्यबस्थित शहर बसोवासका लागि धेरै देशले ठुलो मिहिनेत गरेका हुन्छन् । मिहिनेत नगरी कुनै पनि शहर सुन्दर र सफा हुन सक्दैन । काठमाडौं उपत्यकालाई अग्लो थुम्काबाट हेर्नुस, वा जहाजबाट नियाल्नुस, वा सडककै चोकमा उभिएर नजर घुमाउनुस । अथवा आफै बसेको घर वरिपरीको वातावरण हेर्नुस, अझ परतिर पुगेर फरक्क फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ । तपाईंले कुनै कोणबाट काठमाडौं उपत्यका शहरको रुप पाउनुहुन्न । विश्वमै बैराग्य बजारमा किन परिणत भयो यो उपत्यका ? यसकाे सुधारतर्फ लाग्ने सुर्वण अबसर थियो ओली सरकारलाई । तर, यो अवसरलाई ओली सरकारले पुरै दुरुपयोग गरिदियो ।
राजनीति पहुँचले-को दुर्गमको-को सुगमको छुट्याउन नसकिने अवस्था छ । सबैलाई काठमाडौं ताक्ने नशा चढेको छ । काठमाडौं बसेपछि ठुलो बनिने अभिमान सबै नेपालीलाई पलाएको छ । पछिल्लो पटक राजनीति र आन्तरिक द्धन्द्धले पनि धेरैलाई उपत्यकामा तानिदियो । तर, अब यसका लागि नियन्त्रित र ब्यबस्थित बसोवासको अवधारणा नल्याइ सुखै छैन ।
अहिले विश्वमा फैलिएको कोरोनाको प्रकोपले हामीलाई एउटा शिक्षा दिएको छ । त्यो बाटो भनेको ब्यबस्थित बसोबास नै हो । विकसित मुलुकको त्यो सभ्य शहरमा कोरोनाको प्रकोपले त्यो बेहाल बनाइदिएको छ । हामी त यसै भद्रगोलमा छौं । हामीले कति रोगव्याधी व्यहोरिरहेका छौं, त्यो भनि साध्य छैन ।
चीनको एउटा उदाहरण हेरौं । चीनको मुख्य विधायीका सदन (नेशनल पिपुल्स कंग्रेस) मुख्य सदनमा एउटा विधेयक पेश भयो । त्यो हो, आन्तरिक बसाँई प्रणाली । १७ बर्ष अघि पास भएको यो विधेयक अहिले चीनभरि लागु भएको छ । यो विधेयकले गाउँबाट शहर बस्नका लागि अनुमति खोज्छ । चिनियाँ नागरिक आफ्नो इच्छा अनुसार, आफ्ना कुनै पनि शहरमा बसाँई सर्न वा बस्न पाउँदैनन् । यसको बिशेष प्रावधान छ । चीनको मुख्य भूमिमा, घरेलु रजिष्ट्रेसनको प्रणालीले आन्तरिक बसाई सजिलो बनाएको छ । जथाभावी बसाँई सरे वा घर वनाए स्थानीय सरकारले अनुदानित विद्यालय शिक्षा, अनुदानित आवास, र स्वास्थ्य बीमा जस्ता सेवाहरू प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन् । शहरीकरणको नियन्त्रण गर्न यो प्रावधान गरिएको हो ।
विश्वकै धेरै जनसंख्या भएको चीनले यो प्रणाली नबसाइएको भए मानिस मानिस बीच खप्टेर धेरैको मृत्य भइसक्थ्यो । सबैको चाहना ठुला शहरमा बसौं भन्ने हुन्छ । सबैलाई सुविधाजनक ठाउँ चाहिन्छ । त्यसैले, यसलाई रोक्न चीन सरकारले सुविधालाई विकेन्द्रीकरण मात्र गरेन, ठुला शहरमा स्थायी वा अस्थायी बसोबासमा कडाइ गरिदियो । अहिले विश्वका धेरै विकसित मुलुकले यहि प्रणाली अपनाएका छन् । देशको राजधानीमा बस्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान लागु गरिएका छन् । जस्ले गर्दा केही देशका राजधानीमा भन्दा अन्य शहरमा जनसंख्या बढि छ । तर, नेपालमा मात्र किन राजधानीमै एक चौथाई जनसंख्या ओइरिएको छ ? अब यो प्रश्न उठाउनुपर्छ ।
नेपाल तुलनात्मक रुपमा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक होइन । मधेशमा तीव्र रुपमा जनसंख्या बढेपनि पहाड र हिमालसम्म जनसंख्या घट्दो क्रममा छ । तर, पनि काठमाडौंका गल्ली हेर्यो भने बंगलादेश जस्तो पुरै भद्रगोल छ । विश्वमा सबैभन्दा अब्यबस्थित शहरहरु भएको देश वंगलादेश हो । अहिले काठमाडौं जनसंख्याको ठुलो चपेटामा छ । मोटामोटी अनुमान अनुसार, स्थायी र अस्थायी गरेर यो उपत्यकामा करिब ६० लाख मानिस बसोवास गर्छन् । तथ्यांक विभागको रेकर्ड अनुसार, पनि अस्थायी रुपमा यहाँ ६० प्रतिशत बढि मानिसको बसोवास छ । यो डरलाग्दो चित्रण हो ।
यसका लागि सरकारले केही प्रावधान गर्न सक्छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन आयोजना तयार गरेर उपत्यकाको कहालीलाग्दो जनघनत्वलाई घटाउन सक्छ । अहिले प्रदेश प्रणाली लागु भइसकेको छ । हरेक प्रदेशका सदरमुकाम तोकिएका छन् । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, रोजगार, ब्यबसायीलाई थोरै भएपनि विकेन्द्रीकरण गरिदिएको छ । यसैका आधारमा नागरिकका हितका लागि जुन नागरिकको जन्मघर जहाँ हो त्यहिं फर्काउने कदम चाल्न सक्नुपर्छ । जस्तो उदाहरणका लागि, दार्चुलाको होस वा अछामको होस वा म्याग्दीको होस् हरेक नागरिकले त्यहि नजिकको शहरबाट सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ । यसरी हरेक जिल्लाका नागरिक आफ्नै जिल्लामा स्थायी रुपमा फर्काउने गहन कार्यको शुरुवात गर्नुपर्छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण नभएसम्म भारतको सिमानामा कडाई गर्न नेपाल सरकार पुर्ण रुपले चुक्यो । नेपाल–भारतको ८८५ किमी लामो खुल्ला सिमानाका हरेक खण्डमा नेपाली सुरक्षकर्मीको उपस्थिति अनिवार्य चाहिन्छ । सरकारले सबैभन्दा अनिवार्य गर्नुपर्ने काम यहि हो । तर, सरकार सीमाना सुरक्षामा कमजोर सावित भइसकेको छ ।
अहिले यो उपत्यका शहर होइन, बैराग्य बजार मात्र वनेको छ । शहरमा धेरै सुविधा हुन्छन् । जस्तै, टोलको बीचमा अनिवार्य बालबालिकाको लागि खेल्ने बालबाटिका, हरेक स्थानमा खेल मैदान, पैदलमार्ग, अपांगहरुका लागि सडक पेटी, पार्क, सवारी पार्किङस्थान । यी अनिवार्य आवश्यकता हुन् । तर, जनसंख्याको चाप यति धेरै बढेर गयो कि भएका खाली स्थानहरु भरिंदै गए । अहिले उपत्यका कुरुप मात्र भएको छैन । भगवान भरोसा बाहेक केही छैन उपत्यकाको बसोवासको चित्र ।
टुँडिखेल मिचिएको छ । सम्पदा मासिएका छन् । सार्वजनिक जमिन नासिएका छन् । दुर्गमबाट आएका नबधनाढ्यहरुले टावर उठाईदिएका छन् । राजनीति पहुँचले-को दुर्गमको-को सुगमको छुट्याउन नसकिने अवस्था छ । सबैलाई काठमाडौं ताक्ने नशा चढेको छ । काठमाडौं बसेपछि ठुलो बनिने अभिमान सबै नेपालीलाई पलाएको छ । पछिल्लो पटक राजनीति र आन्तरिक द्धन्द्धले पनि धेरैलाई उपत्यकामा तानिदियो । तर, अब यसका लागि नियन्त्रित र ब्यबस्थित बसोवासको अवधारणा नल्याइ सुखै छैन । यो कोरोना संक्रमण फैलिएको अबस्थामा यी सबै कामहरु गर्ने सरकारलाई गजबको अबसर थियो । तर, सरकारले जनतालाई पुरै धोका दियो ।
भनिन्छ, हरेक संकटसंगै अर्को अवसरको बाटो निस्कनेछ । अहिले विश्वलाई कोरोनाले परिवर्तनशिल बनाइदिएको छ । बालवालिका कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने बिषयमा हरेक देश चिन्तित छन् । तर, ओली सरकार आफ्नो बखान आँफै गर्न फुर्सद पाएको छैन । अहिले कोरोनाबाट सचेत बन्दै यसले देखाइदिएको ब्यबस्थित बसोवासको आवश्यकताको बाटोमा नेपाल अब अघि बढ्न सक्नेतर्फ ओली सरकार सचेत बन्न सकेन । किनकी, यस्ता विभिन्न रोगब्याधीबाट बंच्न ब्यबस्थित बस्ती पहिलो आवश्यकता हो । निरोगीहरुका लागि अहिलेको उपत्यका पुर्णरुपमा प्रत्युपादक स्थान हो भन्ने सबैले हेक्का गर्न जरुरी छ ।
अब चीनलाई हेरौं । माओको कम्युनिष्ट राजनीति अघि चीनमा सनयात सेनको शासन थियो । पद र शक्तिका कारण सनयात सेनको पार्टी टुक्रिएर चनाचुर भयो । बिभिन्न राजाहरुबाट चीनलाई स्वतन्त्र पार्ने सेनको प्रजातन्त्रवादी पार्टीलाई कम्युनिष्टले सधैंका लागि निषेध गरेर समाप्त पारिदियो ।
सरकारले न विकासका काम गर्न सक्यो न दैनिक जीवनयापनमा सहजता । कोरोना शुरु भएदेखि नेपाली किसानका तरकारी, फलफुल, दुग्धजन्य पदार्थ विक्री नभएर खेर गइरहे । नेपाली किसानका उत्पादनलाई बजार प्रबद्र्धन गर्न सरकारले कुनै पहल नै गरेन । कोरोना भाइरस नियन्त्रण नभएसम्म भारतको सिमानामा कडाई गर्न नेपाल सरकार पुर्ण रुपले चुक्यो । नेपाल–भारतको ८८५ किमी लामो खुल्ला सिमानाका हरेक खण्डमा नेपाली सुरक्षकर्मीको उपस्थिति अनिवार्य चाहिन्छ । सरकारले सबैभन्दा अनिवार्य गर्नुपर्ने काम यहि हो । तर, सरकार सीमाना सुरक्षामा कमजोर सावित भइसकेको छ ।
सरकारको यही शैलीले गर्दा पुर्वएमाले ओलीसँग टाढिएको छ । ओलीको व्यवहारबाट रुष्ट पुर्व एमालेकै माधव नेपाल पक्ष पनि भविश्यमा ओलीसँगै नबस्नेगरि कडा प्रतिवादमा उत्रिसकेका छन् । विश्वमा धेरै वाद वा शासनहरु अन्त्य हुनु अघि यस्तै खालका संकेतहरु देखा पर्ने गर्दथे ।
अमेरिकालाई त्यो बेला स्वतन्त्र गर्ने फेडरलिस्ट पार्टी अहिले पुरै हरायो । स्पेनिस र अंग्रेजहरुको कित्ताकाटमा अल्झिएको अमेरिका निर्माण गर्न फेडरलिष्ट पार्टीको ठुलो योगदान थियो । तर, दम्भका कारण यो पार्टी अहिले सिद्धिएको छ ।
पाकिस्तान हेरौं । भारतबाट अलग्प्याएर पाकिस्तान बनाउने त्यो बेलाको पार्टी अहिले शुन्य अबस्थामा छ । मुस्लिम लिगले पाकिस्तान त बनायो । तर, नेताहरुको बीचको खिचातानीले सयौं टुक्रामा बिभाजन भएर यो पार्टी समाप्त भयो । अब चीनलाई हेरौं । माओको कम्युनिष्ट राजनीति अघि चीनमा सनयात सेनको शासन थियो । पद र शक्तिका कारण सनयात सेनको पार्टी टुक्रिएर चनाचुर भयो । बिभिन्न राजाहरुबाट चीनलाई स्वतन्त्र पार्ने सेनको प्रजातन्त्रवादी पार्टीलाई कम्युनिष्टले सधैंका लागि निषेध गरेर समाप्त पारिदियो ।
रुसलाई हेरौं । सन १८०० मा सर्ब शक्तिमान रुस १९९१ मा आइपुग्दा १४ वटा देशमा बांडियो । रुस लगायत मलेशिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, देशहरुमा उग्र बनेका कम्युनिष्टहरु अहिले शुन्यमा झरिसकेका छन् । अहिलेको ओली प्रवृतिले माथिका केहि उदाहरणको संकेत गर्छ । सरकारको नेतृत्व गरेदेखि ओलीका बिलासपुर्ण शैलीको जनस्तरबाट निकै आलोचना भयो । ओलीको जन्मदिन भव्य मनाउँदा गरिब जनताहरु भोकले रोइरहेका दृष्य यहि कार्यकालमा जनताले भोग्नु पर्यो ।
यतिबेला प्रचण्डले ओलीलाई तेर्साएका ३३ वटा गंभिर मुद्धाहरु जनताकै आवाज भएको सर्बत्र चर्चा चलेको छ । के साच्चि प्रचण्डका आरोप सही र ओलीका उत्तरहरु पुर्वाग्रह हुनेछन् त ? यो प्रश्न जनताले हेरिरहेका छन् । तर, ओलीले प्रचण्डलाई तर्साउन द्धन्द्धकालिन मुद्धाका उत्खननहरु जनताका लागि अपाच्य सावित हुने निश्चित छ । आफु कर्तब्यबाट विमुख भएर प्रचण्डलाई ओलीले रिसराग साँधेको मात्र जनताको बुझाइ हुनेछ । यदि ओलीले प्रचण्डको प्रत्युत्तरमा हेग यात्रा उच्चारण गरे भने जनताले त्यो कालो छाँया भित्र पहिलो नंवरमा ओलीकै तस्विर देख्नेछन् ।
अब शालीनदीमा सहभागी हुन व्रतालुलाई कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य ८ मिनेट पहिले
कोरोनाविरूद्धकाे खाेप नेपालमा ५५ मिनेट पहिले
दाहाल–नेपाल समूहको जुलुसमा निर्धारित नारा मात्र लगाउन निर्देशिका ४ घण्टा पहिले
चुनाव हुन्छ, तयार रहनुस् : प्रहरी महानिरीक्षक थापा २७ मिनेट पहिले
बन्द प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोली पोखरामा २७ मिनेट पहिले
राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा चन्द्रपुर ६–० गोलले पराजित ३४ मिनेट पहिले
विगतको कमजोरीबाट पाठ सिकेर बलियो बन्दै सिटिजन्स बैंक ५ घण्टा पहिले
जानेबेला ७३ जनाको सजाय माफ गरे ट्रम्पले २३ घण्टा पहिले
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : प्याकेज २ मा एक अर्ब खर्च १३ घण्टा पहिले
जुवाकाे खालमा प्रहरीकाे छापा, एक लाख रकम एसपीकै खोजीमा ! ४ दिन पहिले
यी दुई लघुवित्तको साधारण सभा आइतवार हुँदै ६ दिन पहिले
नेपालका १० जना पर्वतारोहीले हिउँदमा आरोहणको कीर्तिमान रचे ५ दिन पहिले
सर्लाहीबाट चाँदीका गहना र सुनसहित दुई जना पक्राउ १ दिन पहिले
भर्खरै ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको ९.९६ प्रतिशतले बढ्यो शेयरमूल्य ४ दिन पहिले
भारतका सबैभन्दा चर्चित यौन विज्ञको निधन ३ हप्ता पहिले
मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ २ हप्ता पहिले
कांंग्रेस प्रदेश सदस्य यादवले गरिन पोखरीघाटको शिलान्यास ८ महिना पहिले
देशभरी छरिएर रहेका अभिकर्ता नै हाम्रा ब्राण्ड एम्बेस्डर हुन् : सीईओ झा ११ महिना पहिले